Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, आज कारोबार कतिमा ? - Pnpkhabar.com
सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, आज कारोबार कतिमा ?
काठमाडौं, २५ माघ : आइतबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार सामान्य बढेर तोलामा ९० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
यस्तै तेजावी सुन तोलमा ९० हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैबीच आइतबार चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । शुक्रबार तोलामा १२९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार बढेर १३१० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।